Hormood naga taga! | Laga soo bilaabo Linux
Waad salaaman tihiin, kani waa qormadaydii ugu horaysay nasiib darose waa aniga, uguyaraan aniga iyo waxaan u maleynayaa dhamaan bulshada SL, inay dhiibaan war murugo leh.
Sabtidii waxaan ogaaday in mashruuca dib dambe loo hormarin doonin. Runtu waxay tahay warkaasi wuxuu igu keenay murugadii iigu weyneyd sanadihii ugu dambeeyay. Waan ogahay, dhowr ayaa dhihi doona waxaa jira waxyaabo badan oo qasab ah oo lagu badalo, laakiin midkoodna isiin maayo wax lamid ah UtutoXS.
Muddo aan fogayn ayaan bilaabay SL. Sanado yar uun. IYO UtutoXS waxay ku jirtaa laptop-kayga illaa bilowgii. Waxay iyada la jirtay runtii waan fahmay mudnaanta inaan dareemo xorriyad, suurtagalnimada doorashada iyo waajibka ku ah barashada ilaalinta.
Ma sahlaneyn aqoonteyda yar laakin waxaan gacan ka helay horuumarinta iyo dhamaan bulshada SL oo maalin walba gacan ka gaysata sii wadista fursadaha loo simanyahay.
La soco UtutoXS in aan aniga kaligey sameysan karo weedha Soviet-kii weynaa ee yiri: XORRIYADU WAA DAMIIR LOO BAAHAN YAHAY.
UtutoXS Waxay ahayd baahidayda, waxaan maareeyaa inaan maanta waxoogaa ogaado oo aan awood u yeesho inaan ku celiyo aqoontaas kuwa u baahan. Sababtoo ah taydu ma aha, ee waa wax soo saar qof kastaana iska leh.
Kaliya waad ku mahadsan tahay wax kasta oo aad na siisay. Gaar ahaan Daniel iyo Luciano oo iyagu ahaa kuwa inta badan i caawiyay, laakiin aan ilaawin inta kale, kuwaas oo waliba mas'uul ka ah sameynta mashruuca waxa uu yahay.
Waxaan jeclaan lahaa inay noqoto oo keliya AAN KU ARKAY.
Waan ka xumahay qoraalkan oo runtii ah catharsiskayga laakiin waxaan qabaa inay ahayd qayb muhiim ah oo bulshada ka mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Hormood naga taga!
Ceeb. Nasiib wanaag waxaan leenahay diro kale sida Parabola ama Trisquel oo loogu talagalay kuwa nadiifiya.
Ama Musix soo noqda
Waxa aanan fahmin waa sababta oo ah dhamaan distrosyada xorta ah waa inay u muuqdaan kuwo fool xun ...
Arch, by default waa wax fool xun oo cidna ma cabaneyso.
Arch kuma yimaado mowduuc guud ahaan, musixigaas wuxuu la yimaadaa mowduuc naxdin leh oo ay dul dhigeen.
Hase yeeshe, qaar badan, isdhexgalka TTY iyo isdhexgalka RatPoison ayaa ah kuwa ugu foolxun dhammaan.
Qaar badan oo ka mid ah ..., qaar, 0,05% dadka isticmaala adduunka, laga yaabee.
Arch ma aha lacag la'aan
Parabola GNU / Linux-Libre, haa.
Waad salaaman tihiin pandev92, waxaad dhahdo qayb ahaan waa run, laakiin UtutoXS ma ahayn mid aad u fool xun markii la rakibey. Guud ahaan dhamaan desktops-yada waxay yimaadeen lama bedelin marka laga reebo midka caadiga oo ah isku dhafka gnome iyo kde.
Waxaan sidoo kale ka cawdaa in distrosku ay leeyihiin mowduucyo fool xun, astaamaha ilaahyada gnome waa wax laga yaqyaqsoodo, laakiin innagu wax eed ah kuma lihinno inaan noqono barnaamij-yahanno leh hal-abuurnimo yar oo UU ah, waxaan danaynaynaa inaan ka dhigno mid shaqeynaya iyo nashqadeeyayaashu inay u ekaadaan kuwo wanaagsan in kastoo aad baranayso waxyar oo labadaba ah si aysan wax u tuurin xD
War naxdin leh illukki ... Ilmadii baan daadiyaa!
Ma rumaysan karo. 🙁
Ma aqaano in aan ugu yeedho dhibaato iyo in kale, laakiin waxa jira guud ahaan shuruudaha sharraxaadda ee ku badan nidaamka deegaanka ee SL. Intaas oo keliya maahan, waxaa sidoo kale jira hal-abuur la’aan marka ay timaado magacaabista softiweerka iyo tusaalooyinka cad waa xad-dhaafka isticmaalka shibbaneyaasha, iyadoo ku xiran deegaanka, sida G, K iyo Q.
Trisquel maahan wax fool xun.
Waxaan ku rakibayaa TRISQUEL netbook-ka… .. si fiican ayuu u shaqeeyaa, wuxuu la jaan qaadayaa kombuyuutarradii hore.
Taasi waa run waan jeclahay sida loogu rakibay. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga.
OpenSuse oo leh Kde, Ubuntu oo leh Midnimo, Fedora Gnome Shell iyo Lxde oo si fool xun loo hagaajiyay? ku fiican dhadhanka ayaa jebiya noocyada.
Wuxuu ula jeeday in 100% free distros ay u muuqdaan kuwo fool xun. Kuwa aad magacowday 100% xor ma ahan.
Sidoo kale, kuwa ay kafaala qaadayso FSF waxay had iyo jeer noqon doonaan jahwareerka ixtiraamka qaadashada falsafada FSF.
Naxariis darro, weligay ma tijaabin karin sidoo kale, sababtoo ah kaydinta soo-dejinta iso waxay ahayd gaabis gaabis ah.
Weedha ah "Xorriyaddu waa garashada lama huraanka" waxay ka timid Hegel. Engels ayaa ku soo ururiyay buugiisa Anti-Dürhing.
Waad salaaman tahay diazepan, waa wax qariib ah waxaan ku aqriyay Lenin marxaladiisii ​​sare boqornimadii hantigoosadnimada. Laakiin maadaama aanan u haynin inaan caddeeyo, waan aqbalayaa sixitaanka.
Lenin, dimuqraadiyaddaas weyn !! (ironic mode off)
Hagaag, marka laga hadlayo siyaasada dhamaanteen iskuma fikirno isku mid, inkasta oo aanan ka garaneynin buuqa oo dhan hadii labada daraf loogu tala galay dadka inay ka shaqeeyaan kaliya cuntada.
Maxayse tahay himiladaada dimuqraadiyadeed? Mareykanka? Isbaanishka?
Fekerka Lenin ee dimuqraadiyadu wuxuu ahaa inuu ka dhex dhiso golayaasha shaqaalaha (soviets), laga bilaabo xarumaha shaqada, warshadaha, aqoon isweydaarsiyada, si ay proletariatku ugu fuliso si rasmi ah, iyaga oo ka dooranaya wakiillada iyaga ka mid ah, kuwaas oo ahaa shaqaale iyaga la mid ah. , waana laga noqon karaa wakhti kasta. Waxyaabo kale oo aad u kala duwan ayaa ah shirkadda weyn ee xafiisyada ka shaqeysa oo markii dambe USSR noqotay, iyo dabcan, megalomania oo ay warbaahinteenna "adduunkeenna xorta ah" ay noo sheegi jirtay tan iyo dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
fikradayda dimuqraadiyadu waa midda halka fikradaha oo dhan laga aqbalo, muddo, iyo cuba midkoodna, ama venezuela ama ussr, ama bariga Jarmalka ama dhammaan qalabka yurubta bari, weligood waxay tusaale u ahaayeen dimuqraadiyadda. Iskusoo wada duuboo, shuuciyadu waxay aad ugu egtahay hantiwadaagii qaran ee Hitler.
Waxaan kaliya rabay inaan isku dayo, inaan isticmaalo Gentoo.
Haye, waan isticmaali doonaa inta aan awoodo ka dibna Gentoo ayaa timaadda.
Gentoo, ra'yigeyga, waxay ila egtahay diiwaan-gelin ahaan aniga ahaan sidaa darteed waa inaad wax walba soo ururisaa.
Ma jiraa qof garanaya aqoonta aad u baahan tahay inaad yeelato, inaad wax ku biiriso ahaan ahaan
Waa wax laga xishoodo, laakiin taasi maahan sida ay noloshu tahay, distros go distros come.
Nasiib darro run. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga.
Macasalaamtan ayaa naga caawin doonta, inaan ka warqabno sida ay ugu adag tahay barnaamijyayaashu inay ilaaliyaan qaybinta Linux.
Taasi waa sababta caawimadeena iyo iskaashigeenu marwalba u ahaanayaan fekerkeena oo markaan dhaliilno, u maleyno in gadaashiisa ay taasi tahay qof waqtigiisa u huraya si jaanis ah, iyo in hadii mararka qaar uu doonayo inuu xoogaa lacag ah helo, taasi ay noqon doonto faa iidada shaqada waad ka bixi kartaa.
Anigu intaa in ka badan idinma oggolaan karo.
Haddii aadan dayactiri karin mashruuc, waxaa fiican inaadan bilaabin, waa inaad taqaanaa sida loo saadaaliyo waxa awoodaada, waqtigaaga iyo ujeedooyinkaadu yihiin.
Mashaariic shaqsiyeed way ku dabaqi laheyd, laakiin mashaariicda bilaashka ah way ka sareeyaan taas, sababtoo ah furitaankeeda iyo dabeecadeeda bulshada, qofkasta wuu qaadan karaa markale.
Waan ku raacsanahay Jvare maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in ujeedka uu rabo inuu faallooyinkiisa ka bixiyo ay tahay inuu na xusuusiyo in xayawaan badan ay ka dhex jirto dadka isticmaala nidaamyada lacag la’aanta ah, ilaa heer marka aan aragno badhanka "ku deeqo" aan argagaxno (I Waxaan u maleynayay inay bilaash tahay!
Waxaa jira macno la mid ah nidaam kasta oo kale, dadka isticmaala waa dad, sida osx ama daaqadaha isticmaala, markaa waxaad ka heli doontaa isla falcelinno.
Anigu ma dhihin ma jirin nidaamyo kale, in kastoo aanan hubin inaan helo isla falcelintii, inaan kubilaabo maxaa yeelay mashaariicda lahaanshaha ee ku badbaada iyadoo lagu saleynayo tabarucaaddu way yar yihiin, dadka caadaystay softiweeriyada lahaanshahoodu waxay ku badan yihiin fikradda ah bixin ama isticmaal dildilaac, labadaas kiis midkoodna wuxuu aqoonsan yahay dadaalka horumariyaha.
"Aniguna waxaan ku celinayaa, marka aad bilowdo mashruuc waa inaad taqaanaa sida loo aqbalo dhaleeceynta, ha ahaato mid bilaash ah iyo haddii kale, waxba isma beddelo." Intaas horay uma aadan dhihin, laakiin haa, gebi ahaanba waan oggolahay, waan aqbalay dhaleeceynta waxaanan u qaadanayaa hadba cidda ay ka timaaddo.
Aniguna waxaan ku celinayaa, marka aad bilowdo mashruuc waa inaad ogaataa sida loo aqbalo dhaleeceynta, ha ahaato mid bilaash ah iyo haddii kaleba, waxba isma beddelaan.
Dhaleeceynta waxaa loo sameeyaa oo kaliya si loo hagaajiyo cilladaha, marka xaaladdan aan la helin waxay noqoneysaa cay.
Waxaa jira qeybsi aad u tiro badan oo ku jira barnaamijka bilaashka ah ee…. Haddii barnaamijyada bilaashka ahi ay doonayaan inay guuleystaan, waa inay diiradda saaraan abuurista barnaamijyo la jaan qaadaya kombuyuutarrada oo buuxiya baahiyaha aasaasiga ah ee isticmaalayaasha celceliska ah.
Waxaan u baahanahay: tifaftire fiidiyoow ah oo beddelaya, LibreOffice waa in la dhalaalaa, Inskcape iyo gimp waa in la hagaajiyaa.
dabcan barnaamijyada kale waa inay horumariyaan
Taasi waa run. Haddii dhinacyadan aysan hagaagin, waxaan had iyo jeer ku xirnaan doonaa qaybinta Windows Vista + CorelDraw, Adobe Creative Suite iyo qalab kale oo lahaansho.
Pus 8 bilood ka hor waxaan helay pc waxaan bilaabay inaan barto barnaamijka oo debian-kaygu waa kaliya repos main waxbana kamaan seegin oo waxaan sameeyay ciyaar fiidiyow ah (oo leh c ++, sdl, inkscape (oo ah shabaqa)) taas oo aan wax weyn ahayn laakiin mishiinka iyo sawirada iyo wax kasta oo aan ahayn muusigga waa aniga, waxaan kaliya u baahanahay inaan dhammeeyo ogaanshaha sida loo sameeyo bog internet oo aan u soo galiyo. Barnaamijkaas bilaashka ahi waa dib-u-qabashada oo xitaa ma ogid.
Hagaag, waxaan inbadan ka shaqeeyaa tafatirka fiidiyowga iyo qaabeynta qaabdhismeedka. Inkscape iyo GIMP illaa iyo hadda, wali lama qabsan qalabkooda.
nolosha koofiyad dijo
Waxaan doonayaa bilaash, sidaan idhi oo haddana waan doonayaa.
Ku jawaab cascovida
Wow ... Waxaan isku dayay waqti dheer kahor VirtualBox, waana wax laga xishoodo, iyo waxyaabo kale maxaa yeelay waxay ahayd 100% kii ugu horreeyay ee bilaash ah, laakiin hey, waxaan haysannaa 100% disros bilaash ah sida trisquel iyo parabola (waxaan isku dayay markii dambe in muddo ah aad ayaanna kugula talinayaa).
Laakiin ma lagama maarmaan baa in ay jiraan laba boqol oo kun oo qaybinta oo ku kala duwan yar iyo ka yar? Ututuo, oo ah qaybinta bilaashka ah iyo Argentine, muddada.
Caqli xumadaas ay qabaan kuwa aan is beddel doonka ahayn. Better bilowga isticmaalka LFS.
«UtutoXS ayaa ii baahday. Sababtoo ah taydu ma ahan, ee waa wax soo saar qof walba waana iska leeyahay qof walba. ”
Waad iga heshay walaalka dareenkeyga, waana ceeb dhab ah inaad horay u socoto oo aad xasuustaas quruxda badan ilaaliso.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka. Hadday iga tagto xusuus wanaagsan (xitaa kuwa la igu ixtiraamo »# $% maxaa yeelay socodkeeda XD ma aanan sameyn karin). Salaan.
Laakiin qofna weligiis ma isticmaalin ututo!? Waxaan u maleynayay in kaliya uu adeegsaday aasaasihii Diego O. oo isna muujiyay inuu aad uga daneeyo siyaasada marka loo eego GNU / LINUX.
Sikastaba, waqtiyadii aan tijaabiyey ututo waxaan u arkaa mid culus, peeeeeesaaaadaaaa, oo buurnaan buuxda leh iyo in aysan waxba ku soo kordhinaynin gacaliyahayga Gentoo maadaama aan ka dhigi karo rakibideydu sidii bilaash ahayd.
Dhibaato aan muhiim ahayn oo aan waxba ka tagin iyo in laga reebo dad yar mooyee cidina ma seegi doonto.
Salaan LaPosta; Waxaan isticmaalaa UtutoXS runtuna waxay tahay wixii loo abuuray inay u shaqeyso sidii la rabay. Sida iska cad lama barbar dhigi karo Gentoo laakiin waxay ka dhigeysaa mid la heli karo, maadaama ay igu qaadatay isku dayo badan oo aan ku rakibo Gentoo kombuyuutarkayga.
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga. Salaan.
Mar labaad waad salaaman tihiin, kuwa xiiseynaya, dadku mar horeba way kulmayaan si ay u sii wadaan mashruuca. Waan arki doonaa waxa dhaca.
Faahfaahin dheeraad ah halkan:
http://www.mdzol.com/seccion/hackers/ (waan ka xumahay laakiin ma aanan ogeyn sida loo dhigo xiriirka)
Aad ayey u xun tahay weli waxaan haysannaa Debian 🙂
Waxaan joogaa Debian.
Khasaarihii ka soo gaadhay SL
Ututo, kii ugu horreeyay 100% GNU / Linux Bilaash ah taariikhda history sniff… RIP…
Hadday ceeb tahay. Sidoo kale, koox dad ah ayaa durba bilaabay inay u dhaqaaqaan inay raacaan mashruuca. Waxaan sugi doonnaa RIP-ka aan loo baahnayn.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka iyo xiriiriyeyaashaada. Salaan.
Wax ka ogaanshaha saaxiibki dhacay had iyo jeer waa murugo, sida kuwa kale oo badan oo diros ah, ha ahaadaan hormood ama soosaarayaal, "xulashada dabiiciga ah" ayaa lagu dabaqi doonaa iyaga iyaga kaliya koodhkooda dhaxalka ee la jaan qaadaya macnahooda ayaa "badbaadi doona", sharaf iyo sharaf wixii waxaa loola jeedaa UTUTO, maxaa yeelay tallaabo kasta oo lagu qaado Linux waa tallaabo ay bulshada ku socoto.
Marnaba iskuma dayin, sida muuqata waa distro bilaash ah oo ku saleysan gentoo ...
Xitaa sidaa oo ay tahay, waxay u badan tahay in dadku ay jecel yihiin 'distro' ay fargeeto doonaan, wax la mid ah wixii ku dhacay gnome 2 ...
SIIII, mar hore ayaa wax laysu keenayaa. 😉
Waad ku mahadsantahay faallooyinka. Salaan.
Maxaa war xun uu
PS: Adigu ma waxaad tahay isla qofka aqoonsiga?
Isku dhar iyo kabo.
zombie nool dijo
Waa wax laga xishoodo in mid ka mid ah hormoodkii hore ee runta xorta ah ee SL ay joogsato jiritaankeeda laakiin ay soo socoto. In kasta oo dadka reer Parabola ay aad uga weyn yihiin samaynta kaliya OS-ga bilaashka ah iyo kan loo yaqaan 'avant-garde OS' laakiin si dhammaystiran. Maalin maalmaha ka mid ah 100% free distros waa inay ku biiraan xoogagga. Iyo haddii astaamaha inteeda badani ay yihiin kuwo fool xun oo duugoobay. Astaamo badan oo qurux badan ayaa halkaa ka jira dhamaantoodna waxay ku adkeysanayaan inay isticmaalaan cilado foolxun. Mida kale waa arinta, waxaa jira qaar sida greybird u ifaya heer sare ama aurora la iloobay in kasta oo awooda matoorkaas gtk ah aysan u gudbin gtk3. Laakiin Unico waa badal layaableh. Dadka Gnome waa inay hadda ku beddelaan Faenza astaamahooda caadiga ah. Xitaa kuwa aasaasiga ah ayaa ka qurux badan cirridka cirridka iyo cirrid la'aanta.
Tilmaamayaasha caadiga ah ee KDE waa kuwo aad u fiican oo ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee wanaagsan ee ku saabsan desktop-ka. Waxay leeyihiin noocyo ku filan oo ku habboon goob kasta. Qodob kale ayaa ah qaabeynta asalka ah ee Desktop kasta oo ka mid ah distro kasta oo ah wax aan fiicnayn. Wax lacag ah kuma fadhido bedelida Waraaqda; astaamaha; mawduucyada; qaabeynta darfaha oo ka tarjumaya aqoonsiga distroorka.
War murugo leh, runti aniga xitaa murugo ayey iga dhigeysaa
Waxaan si kal iyo laab ah u rajaynayey in distoorkani sidan ku dhamaan doono. La'aanta dayactirayaasha iyo siyaasad aad u hooseysa ayaa ka dhigtay jahawareerkan hoos u dhaca ku dhowaad bulsho aan jirin
Plasma 2: Nadiifinta wixii horey u shaqeynayay